/Blog/Ithala/I-Synephrine HCL Powder-Ukutshiswa kwamafutha kunye nezixhasi zokunciphisa umzimba
ezaposwa ngomhla 11 / 25 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
1. ISyephephrine HCL Isishwankathelo
Namhlanje, ipesenti ephezulu yabemi ikhangela iindlela zokugcina ubunzima besempilweni. Ewe, phakathi kwabo bonke, ukusetyenziswa kwe I-powder Synephrine HCL yenye yeendlela ezikhuselekileyo onokuthi ugcine amanqatha angenampilo e-bay. I-Synephrine powder yikhompyuter ye-alkaloid ekhemikhali engaqhelekanga ukufumana. Yinto yemvelo efumaneka kwizityalo ezinjengeorenji ekrakra, phakathi kwezinye.
Yeyona nto iphambili kwizinto eziphilayo kwiorenji ekrakra yokusetyenziswa kwayo ekuqaleni kwe-1500s. Ke kanye yayisetyenziselwe ntoni? Kwixa elidlulileyo, esi sixhasi somlingo besisetyenziswa kunyango lweengxaki zesisu ezifana nokuqunjelwa, ukugungqa, kunye nesicaphucaphu. Kwiindawo ezithile zehlabathi, ikwabizwa ngokuba sisiyobisi esisebenzayo kunye nonyango lokungalali kunye nexhala.
Ngokuqala kwetekhnoloji, iorenji ekrakra sele ingqineke iluncedo ngakumbi ekunyangeni iingxaki zangoku ezisusela kusulelo lokungunda kunye neebacteria, i-allergies, kunye neengxaki zesisu. Ukhumbula ukuba icandelo eliphambili leorenji ekrakra yiSynephrine HCL, ikunika isizathu sokuba iqulathe iimpawu zokuphilisa ezininzi.
Ubume be-Synephrine's molekyuleybhule ngendlela efanayo neye-ephedrine, eyenye yezona zinto zibalulekileyo zokutshisa amafutha. Nangona kunjalo, Efdrine ayisekho kwimarike njengendawo yokongeza ukutya; ngenxa yoko, iSynephrine yeyona nto ibambeleyo. I-Octamine yi-metabolite yeSynephrine kwaye ukuza kuthi ga ngoku idume ngokutsha ngamanqatha.
2. I-Synephrine HCL- Indlela yokusebenza
I-Synephrine iyasebenza ngotshintsho lwamandla emveliso yomzimba. Ikwenza oku ngokuchaphazela indlela esisebenza ngayo isibindi, ekhokelela ekudalweni kwee-enzymes ezininzi kwaye ikwadlala indima ebalulekileyo kulawulo lokumba kunye nokuveliswa kwamandla emzimbeni. Uphando olwenziweyo lubonise ukuba iSynephrine HCL (5985-28-4);
Inhibits glucosidase kunye neamylase, ezie-enzyme ezinoxanduva lokumba ukutya kweearches. Ngenxa yoko, akunakulindeleka ukuba kubekho izithuba zeswekile yasemva kwesidlo.
Yonyusa umthamo weglucose kwizihlunu ngokukhuthaza i-AMPK. Le yeyona enzyme yomsebenzi wayo kukuqonda amanqanaba eoyile kwiiseli kunye nokukhuthaza ukutshiswa kweenqatha. Ukongeza, inyusa umthamo weswekile kwiiseli.
I-Synephrine inyusa inani le-ATP ekhoyo. Oko kubonelela ngamandla amaninzi afunekayo ukunceda ukuphendula kwamakhemikhali kwisibindi.
Ikwathintela ukuguqulwa kweswekile ibe ngamanqatha.
Yongeza i-glucose kunye nokuqhekeka kwe-glycogen.
I-Synephrine yi-activator ebuthathaka ye-alpha-1 kunye ne-alpha-2 adrenoreceptors. Imisebenzi emibini ngokuphendula kwi-adrenaline yingakho yonyusa uxinzelelo lwegazi kunye nesantya sentliziyo. Ke ngoko, i-Synephrine 5985-28-4 ayinakulangazelela ukubangela ukunyuka kwesantya sentliziyo okanye uxinzelelo lwegazi.
Lowo ngumahluko ophambili phakathi kwe-ephedrine kunye ne-Synephrine 5985-28-4, njengoko i-ephedrine iyaziwa ukuba isebenze zombini i-alpha-1 kunye ne-alpha-2 adrenoreceptors.
I-Synephrine HCL iphinda ivuselele ii-receptors ze-neuromedin U2. Ezi molekyuli zibekwe kwi-hypothalamus kwaye zonyusa ukuphaphama.
I-Synephrine isebenza ngokuyeka ukuvelisa i-eotaxin-1. Leyo yimolekyuli ebonisa ukuba i-eosinophils iya kwindawo enophazamiseko. Ikwathintela umsebenzi we-oxidase we-NADPH, oveliswa ziitrophil kwaye nawo, udala iintlobo ezininzi zeoksijini ezisebenzayo.
Ngokuncitshiswa kokusebenza kwe-NF-kB, i-Synephrine inciphisa ukuvuvukala. Kungenxa yokuba i-NF-kB egqithisileyo iyaziwa ukuba ibangela izifo ezosulelayo njenge-psoriasis, isifo samathumba esosulelayo, kunye nesifuba.
I-Synephrine isebenza ngokuthintela i-butyrylcholinesterase kunye nee-enzymes ze-acetylcholinesterase, eziyingozi kwizigulana zeAlzheimer.
3. ISynephrine HCL Sebenzisa
(1) I-Synephrine HCL yokuLawula uBunzima
Synephrine yi ukulahleka kwesisindo esebenza ngeendlela ezininzi.
Njengoko ukunqwenela ukutya- Ngaba uluhlobo lomntu ohlala ehlutha? Ndiya kuthetha, nasemva kokutya okunzima, isisu sakho asithathi xesha lide ngaphambi kokuba siqale ukukrokra kwaye ndicele into. Ngelixa unokufuna ukunciphisa umzimba, lo ngomnye wemiceli mngeni onokudibana nawo. Ngethamsanqa, oku ukulahleka kwesisindo icinezela indlala kunye nokucela ukufunxa, ukwenza uzive uphela kungekudala.
Ngenxa yoko, unokunamathela ekutyeni kwakho okunempilo njengoko bekucwangcisiwe kwaye unciphise umzimba ngokungabi namandla. Phambi kokuba uyiqaphele, uyakuzonwabisa ngalo mzimba webhayiti ulingeneyo osoloko uphupha ngawo.
Amafutha amaninzi awanobungozi empilweni, kodwa anokukwenza ubonakale umbi. Ukutshisa amanqatha kuza nezibonelelo ezinkulu, kubandakanya ukwenza ukuba uphile ixesha elide. Ngethamsanqa, ukusetyenziswa kweSynephrine HCL yenye yeendlela ezingqiniweyo ongazisebenzisa ukunyibilikisa amanqatha omzimba. Nantsi indlela ekunceda ngayo ukufezekisa le njongo;
Ukunyusa amanqanaba amandla ngexesha leseshoni yomsebenzi
Akunyanzelekanga ukuba uye ejimini kwaye uzive udiniwe kwaye ulele; I-Synephrine ikufumene. Isebenza njengamafutha ngokukutyisa ngawo onke amandla owadingayo ukuba ube neseshini yokuzivocavoca ngokubulala. Iimpuku zilawulwa kunye I-powder Synephrine baqwalaselwe ukuba babenakho ukubhukuda ixesha elide, kubonisa ukuba amanqanaba abo amandla ayenyuka.
Ngokuphucula amanqanaba amandla, iSynephrine iyaziwa ukomeleza intsebenzo yeembaleki ngokunjalo. Isiphumo esidibeneyo senkcitho yamandla eyonyukayo yamafutha kunye nokukhuthaza ukunyusa ukusebenza kunye nokunyusa inani lokukhupha okufunyenwe kuzo zombini ukuzivocavoca kwe-aerobic kunye ne-anaerobic. Oko kuyenza ukuba ibe sisixhasi esikhulu sangaphambi kokuba sisebenze kunye kwaye umtshisi manqathe kakhulu.
Uphononongo olwenziwe kumadoda alishumi elinambini lubonise ukuba emva kokuthatha le powusta yokunciphisa umzimba ibe yimizuzu engamashumi amane anesihlanu ngaphambi kokuzivocavoca ukunyusa umthwalo wabo omkhulu. Bakwazi nokwenza uphinda-phindo ngakumbi xa kuthelekiswa ne-placebo. Ngokudibanisa ne-caffeine, iSynephrine yonyusa izifundo eziphindwe kabini zezifundo.
Le yinkqubo yokuhlutha amanqatha emzimbeni. Ichazwa ngcono njenge-metabolism. I-Synephrine isebenza ngokunyusa izinga loku-metabolic kungoko yenza ukutshiswa kwephunga elinye ngokukhawuleza. Icacisa ukuba kutheni ukuthatha i-Synephrine kukwenza ukuba utshise amanqatha amaninzi ukusukela xa umetabolism uphezulu, umzimba wakho uya kufikelela kumanqatha agcinisiweyo ukufumana ngaphezulu.
Uphando olwenziwe kuyo lubonisa ukuba ngedosi enye ye-50mg, isiseko se-metabolic basal sonyuswe ngeekhalori ze-65 kwimizuzu engamashumi asixhenxe anesihlanu ezayo. Xa zidityaniswa nezinye iimolekyuli ezithi hesperidin kunye ne-naringin, ukunyuswa kwe-metabolic kwaqwalaselwa ukuba inyuke ngaphezu kwekhulu elinamashumi asibhozo eekhalori. Izixa ezinjalo zeekhalori zitshiswa ngemizuzu engamashumi amabini yokubaleka.
Ukuthathwa kwezihlunu zeswekile
I-Synephrine isebenza ngokuvuselela ukuthathwa kweglucose ngesihlunu samathambo. Oko kunceda ukutshisa amanqatha ngokususa i-glucose engaphezulu kwinkqubo yegazi. Inegalelo nasekuboneleleni izihlunu kunye neglucose esetyenziswa ngokufanelekileyo kumandla. Ke ngoko, iglucose engakumbi yokuthetha kuthetha amandla amakhulu emisipha kunye nevolumu.
4. I-Synephrine HCL Dosage
I-dosage ye-Synephrine HCL iyahluka ukusuka komnye umntu ukuya komnye. Nangona kunjalo, umthamo oqhelekileyo njengesiqhelo ukulahleka kwesisindo yi-100mg ngemini. Uphando, nangona kunjalo, lubonisa ukuba umthamo we-Synephrine HCL ye-35mg nayo iyasebenza. I I-dosage ye-Synephrine HCL akufuneki ibe ngaphezulu kwe-200mg ngosuku ukunqanda ubuthi.
Ukuba lixesha lakho lokuqala ukuyithatha, qalisa ngomthamo ophantsi malunga ne-10-20mg kuvavanya ukunyamezelana kwakho. Ukuba awuphethwe kakubi yimiphumela emibi, ungayonyusa umthamo ngokuthe ngcembe. Sukunyusa ixesha lokuphumla ngaphezulu kweeyure ezimbini ukuya kwezine, kuba oku kungakhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu.
Kwisiphumo sokwakhiwa komzimba kweSynephrine okanye njengesixhobo sokutshisa inqatha, kuya kufuneka uqiniseke ukuba uyayithatha into yokuqala kusasa kunye nemizuzu elishumi elinesihlanu ukuya kumashumi amathathu ngaphambi kokuzilolonga. Kunconywa ukuba ubathathe ngamanzi.
Ngexa abanye abantu benokukhetha ukuthatha iSynephrine ngokwabo, abanye banokukhetha ukuyifaka. Ungayisebenzisa ngokudibeneyo nezinye iithayile zokunciphisa umzimba kunye nezo zikhuthaza amandla akho. I-Yohimbine ihlala kakuhle neSynephrine, ngakumbi ukuba eyona njongo yakho kukuphulukana nomzimba.
I-L-theanine nayo lukhetho olufanelekileyo njengoko idibanisa kakuhle kunye nasiphi na isivuseleli. Umsebenzi wayo kukususa iziphumo kwaye wandise umsebenzi wengqondo. Amagxolo emiyele emhlophe angabandakanywa kwisitaki ngenxa yeziphumo zaso zes synergistic.
I-Caffeine nayo yenza ukubandakanywa okuhle, nokuba kukwimo yayo engacocekanga ye-anhydrous okanye kweminye imithombo efana nokukhupha i-guarana.
5. Thenga i-Synephrine HCL kwi-Intanethi
Ngaphandle kwamathandabuzo, i-Synephrine HCL yigraff engcwele yokuthoba ubunzima bomzimba. Kuyanceda ukuyicutha inkanuko yakho ukuba ujolise ekutyeni kancinci okanye unciphise ukuthatha ukutya okungekho mpilweni. Unokugqiba ekubeni unciphise umdla wakho wokutya nge I-Synephrine yongeza Iiyure ezingamashumi amabini anesine ukuba ufuna ukungena ngokukhawuleza.
Njengoko kubonwe kwinqaku, kukugcina ukomelele, okuluncedo kakhulu, ngakumbi xa ufuna ukusebenza kwaye utye kancinci. Ngexesha elithathayo ukukhabela ngaphakathi, awuzukukholelwa ukuba ngaphakathi kwemizuzu engamashumi amathathu, uyakufumana isiphumo. Esi siphumo sinokuhlala malunga neeyure ezimbini kuba i-Synephrine isiqingatha-sobomi siziiyure ezimbini.
Ukuba isetyenziswe ngokudibanisa nokutya okunesondo kunye nokuzivocavoca, uya kuphawula ukwakhiwa komzimba weSynephrine kunye nomphumo wokunciphisa umzimba ngaphakathi kweeveki ezimbini zokusetyenziswa. Nabani na ozabalazela ukufumana ukutya okungafunekiyo, ukutya kakhulu, okanye umntu oziva ngathi ufuna ukususa amanye amanqatha kwimizimba yabo, esi sesona sivumelwano!
Uninzi lwamafutha atshisayo ayaziwa ukuba akwenze ukuba ube neziphumo ebezingalindelekanga, kodwa ngaba ungakholelwa ukuba iSynephrine inikezela konke oku ngaphandle kokubeka umzimba wakho emngciphekweni? Uninzi lophononongo lweSynephrine luxela ubuncinci kwiziphumo ebezingalindelekanga kwaye akumangalisi ukuthandwa.
Ngoku ekubeni uzimisele kangaka ukufikelela kwiinjongo zakho zomzimba, ulufumana phi olu lutshiso lwamafutha? Njengokuba iinkampani ezininzi zinokuthembisa ngokukunika eyona Synephrine, kufuneka ulumke kakhulu njengoko abanye benokuthengisa iimveliso ezingezizo. Sikunika ixabiso lemali yakho ngokubonelela ngezixhasi zeSynephrine ezikhuselekileyo nezisebenzayo. Nje wena Thenga iSynephrine ukusuka kuthi, uyaqinisekiswa ukuba uya kutshisa amanqatha kwaye uphulukane namafutha ngokukhawuleza nangokusisigxina.
Izixhasi zethu zokunciphisa umzimba zingenawo umngcipheko kuba ziyi-100% yendalo kungekho zongezo zifihliweyo. Uku-odola umgubo 'wobunzima' bokunciphisa umzimba kuthi namhlanje kwaye ulahle iipawundi ezingafunekiyo kwaye ujabulele izibonelelo zokwakha umzimba zeSynephrine.
Isikhokelo sezeMpilo sezeziNcedisi kwiZempilo, ngokubhalwa nguShawn M. Talbott, Kerry Hughes, iphepha 13
Ukutyeba: I-Epidemiology, i-Pathophysiology-kunye noThintelo, uHlelo lwesiBini, ihlelwe nguDebasis Bagchi, uHarry G. Preuss, iphepha 538
Izongezelelo zesondlo kwezemidlalo kunye nokuzivocavoca, ezibhalwe nguMike Greenwood, uDouglas Kalman, uJose Antonio, iphepha 231